Semalt: Torolalana Super mba hitazonana spam-fanadihadiana ao amin'ny Google Analytics
Nanome toky i Nik Chaykovskiy, manam-pahaizana avy amin'ny Semalt , fa ny iray amin'ireo olana atrehan'ny webmasters amin'izao fotoana izao dia ny spam referendum. Niharatsy ny toe-draharaha nandritra ny taona maro, midika izany fa misy olon-kafa manana vola betsaka amin'ny famoronana spam referral.
Spam Ghost and Referrals
Nandefa ny tatitra momba ny Google Analytics izao ny Spam. Mitady vulnerabilities ao amin'ny rafi-pitenenana ny spam mba hahafahan'izy ireo miseho amin'ny tatitra momba ny angona ao amin'ny tranonkala. Manao izany izy ireo miaraka amin'ny fanantenana fa mampientanentana ny fahalianana amin'ny tanjon'ity tranonkala ity amin'ny fitsidihana ny tranonkalany hahitany ny antony maha-tatitra azy ireo - que es analogo y digital. Ny olana dia tsy mampitombo ny fifamoivoizana izy ireo. Tsy ataon'izy ireo hatramin'ny namoahany bota izany. Mampiasa ny code tracking JavaScrip ampiasaina amin'ny Google Analytics izy ireo mba hamoronana fampahafantarana fa nisy ny fitsidihana. Izy ireo dia mametraka ny antontan'isan'ny fanilikilihana maimaim-poana toy ny fampihenana ny sanda sy ireo singa hafa ampiasaina mba handinihana ny fifandraisana. Ilaina ny fanakanana spam referrals raha ilaina ny data marina, indrindra raha miantehitra aminy mba hahazoana fanapahan-kevitra ara-barotra.
Sarotra ny manakana ny sari-pitenenana manokana satria indrindra ireo mpitsikilo dia miasa haingana, mampitombo ny taham-pitenenan'ny spam sy ny loharano. Midika izany fa mila manatsara ny ezaka ataon'ireo webmasters amin'ny fanesorana sy ny lisitr'ireo loharano ireo. Tena manahiran-tsaina tokoa ny olona manana tranokala vaovao izay tsy mahazo traikefa ara-dalàna. Ny fampitomboana ny taham-pitenenana amin'ny tranonkala toy izany dia mety hampiseho tsy fahampian-tsakafo bebe kokoa izay mety ho mihoatra noho ny isan'andro mahavoa azy.
Mora ve izany?
firaketana an-tsoratra iray isaky ny fitsidihana. Ireo Ghost spammers dia mampiasa ny code tracking Google Analytics ary mandefa ny data momba ny fifamoivoizana mivantana amin'ny tatitra, ka mamerina mitsidika. Mety haka 0,001 segondra ny fametrahana pejy tokana amin'ny serivera any..Na dia izany aza dia mety ho nanery ny 100 mahery tamin'ireo fitsangatsanganana an-tsoratra ireo izy ireo tao amin'ny kaonty Google an'ny toerana maro hafa rehetra. Tena mora ny mividy mpivahiny tokana. Raha mbola mahazo antoka ny ROI ireo mpitsoa-ponenana dia misy fahasimbana maro azony atao amin'izy ireo.
Vahaolana tonga haingana
Ny teknôlôjia sasany dia avo lenta indraindray fa tsy miasa ny vahaolana ampiasaina hanakanana ny famindrana spam. Ny iray amin'izy ireo dia ny serivisy an-tserasera antsoina hoe Darodar. Ireto fomba manaraka ireto dia tsy nazava tamin'ny GA.
Ny rakitra .htaccess. Tsy miasa izy io satria ny spam-n'ny ghost dia tsy manohina ny vohikala
Ny lisitry ny fanavakavahana. Tsy misy fanavaozana.
Ny sivana famaranana. Fomba amam-panafahana izany satria mifantoka amin'ny spam-ny ho avy ary tsy miverina amin'ny adiresy spam taloha.
Ny sora-baventy fanavotana dia saika nahavita nanala ny spam referendum Darodar. Ny hany tokana dia ny tsy fisian'ny lisitra spammer amin'ny toerany tsy tapaka.
Ny tsangambato tsy hita popoka
Tokony havaozina tsara ny vahaolana azo atao mba hamantarana sy hanakanana ny famaritana sy ny angon-drakitra, avy amin'ny tahiry misimisy kokoa, ary miverina amin'ny fanazavana farany. Eo amin'ny sehatra telo ho an'ny vahaolana tsara indrindra, ity dia iray izay miasa.
Dingana 1: Mampiasa segondra hanafoanana ny spam
Tsara kokoa ny mampiasa sehatra satria tsy manova tanteraka ny angona izy ireo. Raha toa ny iray dia manasaraka ireo mpaka sary amin'ny ankapobeny amin'ny fampiasana ny filtration, dia tsy misy fomba ahafahana mamerina azy ireo. Azo atao ny manorina amin'ny angon-drakitra taloha, na dia efa ela aza no teo. Afaka mampihatra azy ireo amin'ny fomba miverimberina ihany koa ny olona iray.
Dingana 2: Mitana ny lisitry ny famaranana
Ny Slack dia fitaovana ahafahan'ireo webmasters ampiasaina hanaraha-maso ireo loharanom-pandaminana..Mampahafantatra ny mpampiasa momba ny referral vaovao izy ary manome azy ny bitsika: na amin'ny lohan-tsokajy na ny lisitra maintimainty.
1. Ny Slack dia mandray ny referral rehetra, ary
2. Mampiasa PHP izy io mba hizaha ny vokatra rehetra amin'ny baikon'ny count, ary avy eo dia mamintina ny lisitra farany amin'ny webmaster mba hahitana raha misy olona mahazatra. Raha tsy izany,
3. Manosika ny sariohatra rehetra ahiahiana ho an'ny fantsom-pahavoazana izay manome ny mpisera safidy eo amin'ny whitelist na lisitra. Na inona na inona safidy izay safidin'izy ireo, dia mitarika amin'ny dingana 4,
4. Miverina amin'ny pejy iray izay manamarina ny didim-pitsarana ho fanamafisana ny fifantenana.
5. Ny slack dia mitahiry sy manidy ireo mpilalao fanta-daza ao anaty tahiry
6. Ny fampisehoana farany amin'ny data madio dia ho amin'ny format regex. Ampiasao ary ampidiro ao amin'ny Google Analytics.
Ny Slack dia mamela ireo webmasters hanova ny lisitr'ireo fanilikilihana farafahakeliny in-dimy isan'andro.
Amin'ny zava-misy, maro ireo vahaolana afaka miasa:
Na dia eo aza izany fomba fanao izany, dia mbola tsara kokoa aza raha mahafa-po azy amin'ny teknika hafa ny webmaster, mba hahazoana antoka fa handrakotra ireo sehatra rehetra. Ankoatra ilay vahaolana voalaza:
Tsindrio eo amin'ny bokotra izay manandrana ny Google Analytics mba hisintonana ireo robots sy hala malaza,
Ampidiro ny "sivana fametrahan'ny solosaina,"
Ny sivana mifandraika etsy ambony dia mahomby indraindray, fa tsy ny vahaolana tsara indrindra mandritra ny fotoana maharitra satria:
Tsy sarotra ny manao ny famonoana ny fampiantranoana, ary ny fampiasana ny fampiasana spamma dia mampihetsi-po azy io ho toy ny vulnerable.
Raha diso ny fametrahana, dia mety hiafara amin'ny fanivanana ireo mpitsoa-ponenana marina